Phakathi Orthodox, okuyinto ngezikhathi onzima ophika ubukhona bukaNkulunkulu ngokuphepha baphepha ngamashwa ukuthi nokho ngehlelwe yilokhu iningi amathempelana Orthodox ezweni lethu, futhi baqhubeka usebenze sezikhathi ezinzima kakhulu emlandweni ekhulwini XX, kunomunye okhuluma lapho ingxoxo ngizoya esihlokweni sethu. Leli thempeli Voronezh ngayingcwelisa behlonipha St. Nikolaya Chudotvortsa.
eyandulela Ngokhuni isonto itshe
Ngisho nangaphambi kokuba kube yakhiwa ngamatshe isonto Nicholas e Voronezh, futhi lokhu kwenzeka, kusho amaphepha lokusinda, e 1720, ibandla wokhuni besezindaweni yayo. Kwakuthinta ngayingcwelisa behlonipha St. Dimitriya Uglitskogo ─ izisulu ezingenacala Indodana encane Ivana Groznogo. amathempelana Its main babe lasendulo altare esiphambanweni isithonjana St Nicholas, ungakashayi umhlaka maphakathi nekhulu XVII.
Ngo-1703, ibandla lapho bebehlala khona: agcinwe, washiswa, futhi phakathi komlilo wakwazi ukusindisa zimbili kuphela kulezi izinsalela lasendulo. Imililo ngaleso sikhathi babemenywe njalo yamadolobha isiRashiya, eyakhelwe ikakhulukazi kulula kakhulu ukufinyelela kuwo impahla ─ ihlathi. Khona-ke abantu abangcwele ngokusebenzisa igama edolobheni bagcwaliswa isifiso sakhe sokwakhela esizeni wokushiswa itshe esontweni esontweni, futhi okwalandela iminyaka 9 anikezelwe ukuqoqwa iminikelo.
Ukudala isonto itshe
ukwakhiwa kwalo kwaqala ngo-1712 (kufakazelwa ingobo yomlando walondoloza imibhalo), futhi kwathatha iminyaka 8. Ngu bokwakhiwa kwezindlu zayo, wayengumuntu eduze owaziwa eMoscow Church of uSanta uJohane Warrior. Ibandla elisha yafakwa kanye igcinwa esiphambanweni altare umlilo futhi isithonjana St Nicholas, egcwele ithuba ngenkathi kunikezelwa izakhiwo abazinikezele St Nikolaya Chudotvortsa. Lamagugu zigcinwa khona kwaze kwaba sekuqaleni XX leminyaka izenzakalo edlubulundayo, they lahlekelwa ngemva kwalokho, futhi ngokusobala unaphakade.
Ngo 1748 St Nicholas Church Voronezh athola umonakalo okuphawulekayo umlilo oqubuke ku phazimo phansula ke. Fire wabhubhisa ophahleni ekamelweni lokudlela kanye nengxenye enkulu ye-Dome. Athintekayo futhi wezangaphakathi. Ukubuyisela isakhiwo edingekayo imithombo abalulekile, kodwa zathathwa sibonga esivulekile abanikeli yokuzithandela sikhathi.
Ukuchuma ethempelini XVIII futhi XIX leminyaka
Ngemva konyaka, lo msebenzi waphela, ne esakhiweni esidala kwahambisana kumkhawulo Saint Dimitriya Solunskogo, lanikezelwa umbhishobhi Feofilakt (Gubanov). Kuyo yonke le minyaka ithempeli seliphelile ngokuphindaphindiwe kulungiswe nihlobise.
Ngo 1768, emhlabeni udonga lwamatshe lamiswao, futhi kamuva uchitshiyelwe iconostasis futhi zaveza ingaphakathi. Ezalandela XIX leminyaka St Nicholas Church Voronezh wayengomunye walaba izikhungo zenkolo edume kakhulu eRussia.
Lokhu akuzange ngesilinganiso esincane nomthelela izimangaliso wabonakaliswa ngokusebenzisa lilondolozwe isithonjana izimangaliso Our Lady of Tolga, okuyinto, njengoba kukholelwa kanjalo ngokuvamile, ukulondolozwa emzini esibi isifo Ubhubhane ngonyaka 1831. Ubuhle bangaphandle yebandla elikhulu sasishaywe ubophekile nenala abathengisi bendawo, phakathi okuyinto ivelele ikakhulukazi amabili imikhaya ─ Meshcheryakov futhi Lyapina.
Iminyaka Engu-yizwe elingakholelwa kuNkulunkulu ezikhathini ezinzima
Ngokungafani Orthodox amathempelana eziningi isiRashiya, ivaliwe noma ubhujiswe amaBolshevik, kunalesi simo esibucayi, ngenhlanhla, lidlule St Nicholas Church. Ngo Voronezh, ngezinye izikhathi kunguye kuphela esebenzayo, nomlando wayo yaleyo minyaka igcwele Amakhasi ezibabayo.
Esikhathini eko, iziphathimandla adluliselwe ethempelini anawo okuthiwa renovators ─ izishoshovu secessionist e Lobu-Orthodox LaseRussia ngesikhathi, ukumemezela basekela umbuso omusha bese uzama ukwenza izinguquko njengoba uqhubeka umkhulekela. Ngonyaka owandulela kugqashuka impi neziphathimandla ngisho ivale phansi, kodwa ngo-1942, isimo samanje kancane baphoqeleka ukuba aphinde acabange isimo sabo sengqondo eSontweni Lobu-Orthodox, isivuliwe futhi.
Ngesikhathi esifanayo isinqumo iziphathimandla Diocesan of St Nicholas Church Voronezh wanikezwa isimo lombhishobhi. Esikhathini esiyiminyaka elandelayo wavalwa kuphela isikhathi esifushane, lapho ngo-1943, ku-ibhange okuphambene Voronezh River, okuyinto wanika gama lo muzi, babe izimpi abanolaka namaNazi, futhi ithempeli seliphelile ezonini lomlilo isitha wezikhali.
Impilo entsha zethempeli lasendulo
Ngemva kwempi, kodwa futhi wonke lamaKhomanisi inkathi ithempeli wahlala ekhuthele futhi uvuselele ngezikhathi. Kodwa umsebenzi emikhulu sokubuyiselwa babengase igcwaliseke kuphela ngo-1988, ngesikhathi izwe usuyezwakala amathonya ukuhlelwa kabusha esizayo. umhlobiso wakhe omusha wathola umkhosi kweMinyaka Eyinkulungwane we Ukubhapathizwa Rus.
Kuyo kwaphinde wenza Ingcenye eqakathekileko yomsebenzi wehlelo Umdwebo elingaphakathi, kodwa ngesikhathi esifanayo abuyiselwe kanye nemidwebo walondoloza ngesineke by amakhosi emakhulwini eminyaka adlule. umhlobiso eliqhakazile olungaphambili lwesonto kwethempeli kwakuyizingalo imifanekiso emibili KaMose, senziwe 1966 no-2005. umculi K. D. Yasinym nalowo asebenzisana naye A. Cheryumovym.
Namuhla, St Nicholas Church (le Voronezh -. Str Taranchenko, 19 a), njengoba eminyakeni eyedlule, akuzi nje izakhamuzi edolobheni, kodwa futhi ube yindawo pilgrimage ngoba amakholwa Ezindaweni eziningi zaseRussia. Avame uthole ukuze bakhulekele imifanekiso ongcwele nezinto ezingcwele izinsika zamukelwa kabanzi ezinkolweni njengoba St Nikolay Chudotvorets, Feofan zatvornik, Euphrosyne ka Suzdal nabanye osanta kaNkulunkulu amaningi, ngumfakisicelo phambi kwesiHlalo sobukhosi kaSomandla ukuchuma abantu agcinwe kubo.